January 2020 - CeleLove
January 31, 2020 CeleLove 0
နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက် တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်း ခံရပါတယ် …။ သင့်ကိုနတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ […]
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လစာ ဟောစာတန်း ….
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လစာ ဟောစာတန်း …. ၂၀၂၀-ခု ၊ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာ သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝ အောင်မြင်မည့် အချိန် ဖြစ်တယ်။ ပြောရရင်တော့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံနိုင်တာပေါ့။ ခြံကိစ္စ ၊ ကားကိစ္စ ၊ […]
၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် တုတ်ကွေးလား ရိုးရိုးအအေးမိခြင်းလားဆိုတာ ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားမလဲ …?
၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် တုတ်ကွေးလား ရိုးရိုးအအေးမိခြင်းလားဆိုတာ ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားမလဲ …? အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်၊ တုတ်ကွေးနဲ့ ရိုးရိုးအအေးမိတာတွေကြား ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ အများစုတူညီသလိုရှိပေမယ့် ဘာတွေကွဲပြားခြားနားသွားတယ် ဆိုတာကို စာဖတ်သူတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ….. “ရိုးရိုးအအေးမိတာ” သင့်နှာခေါင်းနဲ့လည်ချောင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့အခါ ရိုးရိုးအအေးမိဖျားနာတာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးအအေးမိတာလောက်ကတော့ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရမယ့် […]
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့အတွက် လက်တွဲဖော်မိန်းကလေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍများ
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့အတွက် လက်တွဲဖော်မိန်းကလေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍများ အောင်မြင်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေကို ကြည့်တိုင်း သူတို့ရဲ့နောက်မှာ ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိနေတတ်တာ များပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အားထုတ်မှုအပြင် သူ့တို့ကို အကောင်းဆုံး ပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့ ထောက်တိုင်တွေ ပံ့ပိုးတဲ့သူတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာလို့ ချစ်သူရည်းစားရှိလို့ […]
ဝတယ်ဆိုပြီး အမြဲစနောက်နေသူကို မီးရှို့သတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား….
ဝတယ်ဆိုပြီး အမြဲစနောက်နေသူကို မီးရှို့သတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား…. ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို အမြဲအနိုင်ကျင့်ပြောဆိုတတ်တဲ့သူရဲ့အကျင့်ဟာ လုံးဝကိုလက်မခံနိုင်စရာပါပဲ ။ တစ်ချို့ဆိုရင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်အနိုင်ကျင့်တာမျိုးရှိပေမဲ့ တစ်ချို့ဆိုရင်တော့ နှုတ်အပြောအဆိုတွေနဲ့ အနိုင်ကျင့်တာမျိုးရှိကြပါတယ် ။ အခြားတစ်ဖက်က မခံနိုင်တော့တဲ့သူတွေဟာ နောက်ဆုံးဘဝကိုအရှုံးပေးပြီး ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်တာမျိုးရှိသလို ၊ တစ်ချို့ဆိုရင် ပြန်ပြီးလက်တုံ့ပြန်ကြလို့ လူသတ်မိတာမျိုးအထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် …။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း […]
ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာများ တွေ့ရှိထား
ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာများ တွေ့ရှိထား ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာ ၃ ဦး တွေ့ရှိထားပြီး လတ်တလော စောင့်ကြည့် ဆေးကုသမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ကျ အရာရှိများထံမှ စုံစမ်းမေးမြန်းချက် အရ […]
အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ လင်းနို့ကြီးကို မေကြာက်မရွံ့ကိုင်ပြပြီးအော်နေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ လင်းနို့ကြီးကို မေကြာက်မရွံ့ကိုင်ပြပြီးအော်နေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည် မခိုင်လေးလို့ အားလုံးကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ အကယ်ဒမီနှစ်ဆုတိတိ သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မခိုင်လေးကတော့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ပြောဆိုတတ်တဲ့အပြင် ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူမရဲ့ဟန်ပန်လေးတွေကြောင့် အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာရော ပရိသတ်တွေကြားမှာပါ လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာ ဖြစ်ပါတယ် …။ အခုချိန်အထိ […]
ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မရှိသေးလို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူးလို့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးပြော…
ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မရှိသေးလို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူးလို့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးပြော… အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ခွဲမယ့်ပစ္စည်းတွေမရှိသေးလို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူးလို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ် …။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး သံသယလူနာတွေ့ရင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကူအညီနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ […]
မိန်းမလိုချင်ကြောင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့အမျိုးသား တစ်လမပြည့်ခင် ချစ်သူရခဲ့တဲ့အဖြစ် ဒီလရဲ့အစောပိုင်းလောက်က မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Terengganu ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားဟာ ဇနီးသည်လိုချင်ကြောင်းကို ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းကိုဆက်ပြီး မသိခဲ့ရပါဘူး ။ သို့ပေမဲ့လည်း ယခုချိန်မှာတော့ Aziro အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ဖူးစာဖက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါပြီ …။ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့မိန်းမလိုချင်ကြောင်း ကြောငြာပြီမကြာခင်မှာဘဲ ဖုန်းဆက်ပြီးချစ်ရေးဆိုလာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေအများအပြာရရှိခဲ့ပြီး ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက […]
မြစ်​ကြီးနား မန္တလေး ၅၆ အစုံရထားပေါ်တွင်​ လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံး….
မြစ်​ကြီးနား မန္တလေး ၅၆ အစုံရထားပေါ်တွင်​ လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံး…. 30.1.2020 ရက်​ ဇန်​နဝါရီလ ၃၀ ရက်​နေ့ ညတွင်​ မြစ်​ကြီးနားမှ မန္တလေး အသွား အထူးအမြန်​ရထားပေါ်တွင်​ ပါလာသော လူတစ်​ဦး ရုတ်​တရက်​သေဆုံသွားကြောင်း သိရပါတယ် …။ သေဆုံးသွားသော Dead Body အား ည […]